मस्तिष्कघात भएका कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भिर, नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत – Mission Khabar
मस्तिष्कघात भएका कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भिर, नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत
मिसन खबर १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:४५
काठमाडौं । मस्तिष्कघात भएर उपचाररत पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था निकै जटिल रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । नेता जोशीको उपचारमा संलग्न नर्भिकका न्यूरो सर्जन डा. राजीव झाले कोमामा निक्कै जटिल अवस्थामा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
‘सास फेर्न गाह्रो भएको थियो र बान्ता फोक्सोमा पुगिसकेको थियो । सास फोर्न सहज होस् भनेर पाइप राख्नुका साथै फोक्सोमा पुगेको वान्ता निकालिएको छ । डा. झाले बताउनुभयो ।, ‘हेर्दै जाँदा उहाँको एउटा आँखाको नानी फुलेको देखियो । दुबै आँखाको नानी फुलेको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र हुन्छ । एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले काम नगरेको देखियो ।’ सिटी स्क्यान गर्दा रगत दिमागको बीचमा पानी जम्मा हुने ठाउँमा पुगेर ब्लक गरेको पाइएको डा. झाले जानकारी दिनुभयो ।
सुगर, प्रेसर लगायतका रोगबाट समेत पीडित उनले रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहनुभएको थियो । यस्तो मानिसको सर्जरी गर्दा धेरै रक्तश्राब हुने भएकाले रगत जोहो गरेर सर्जरी गरिएको थियो । १२०÷१३० मिलिलिटर पानी निकालेर अहिले भेन्टिलेटरमा राखेर जोशीको उपचार भइरहेको छ । यो अवस्था निकै जटिल भएको र यस्तो अवस्थामा पुगेका ६०÷७० प्रतिशतलाई बचाउन नसक्ने भन्दै डा. झा ले उहाँलाई कसरी बचाउने भनेर लागिपरेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थाबाट बाँचेकाहरुमा ठूलो प्यारालाइसिस लामो समयसम्म रहनसक्ने बताइएको छ ।
बिहिबार राती मस्तिष्कघात भएपछि जोशीलाई वीर अस्पताल हुँदै नर्भिक अस्पतालमा भर्नाए गरेर उपचार गरिएको छ । दोस्रो हात बाउँडिन थालेपछि जोशीले श्रीमती र छोरीलाई अस्पताल लैजान भनेका थिए । गाडीमा बोलिरहेका उनी अस्पताल पुग्दा बोहोस भएको र सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा ठाउँकोमा रगत जमेको पाइएपछि वीरबाट थप उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो ।